Myanmar Stage Drama - လမ်းဆုံများ | Who Has TornaChristian's Family Apart? | နိုင်ငံတော်သက်ဆင်းကြွရောက်ခြင်း၏ ဧဝံဂေလိတရားတော်
Myanmar Stage Drama - လမ်းဆုံများ | Who Has TornaChristian's Family Apart?
ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပြီး ဧဝံဂေလိတရားကို ဖြန့်ဝေခြင်းကြောင့် စီစီပီရဲများ၏ လိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရသော လီရှင်းသည် ရှောင်တိမ်းပြေးလွှားပြီး အိမ်မှ ထွက်ခွာရဖို့ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမကို ဖမ်းဆီးရန်အားထုတ်ရာတွင် ရဲများသည် သူမမိသားစုဝင်တို့၏ အလုပ်များကို ဖယ်ရှားပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ စီစီပီ၏ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းကို ခံရပြီး သူမ၏ မိသားစုသည် လီရှင်းက ဘုရားသခင်အပေါ် သူမ၏ ယုံကြည်မှုကို စွန့်လွှတ်ပြီး ဘုရားသခင်အပေါ် သူမ ယုံကြည်မှု အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ရဲထံသို့ ဝန်ခံရန်အတွက် သူမအား ချော့မော့ဖျောင်းဖျရန် ကြိုးစားကြသည်။ အဘက်ဘက်မှ မိသားစုဖိအားကို ရင်ဆိုင်ရလျက် အဆုံးတွင် လီရှင်းသည် မည်သည့်ရွေးချယ်မှုကို ပြုလုပ်မည်နည်း။ သိရှိရန်အတွက် လမ်းဆုံများ ကို ကြည့်ရှုပါ။